တတိယနိုင်ငံနှင့် အမေရိကရောက် ကရင်နီဒုက္ခသည်တစ်ဦး
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစပြီးတော့ UNHCR ရဲ့သဘောတူညီချက်အရ တတိယနိုင်ငံသို့ သွားရောက်အချ လိုကြတဲ့ ကရင်နီမိသားစုဝင်တွင် ထောင်သောင်းနဲ့ချီပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာ အခြေစိုက်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံးကိုသွားပြီးတော့ လျှောက်လွှာသွားဖြည့်ကြပါတယ်။ တတိယနိုင်ငံသို့သွားရောက်အခြေချ နိုင်ဖို့ဆိုရင်OPE နှစ်ခေါက်လောက် အင်တာဗျူး ၀င်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ DHX ကို အင်တာဗျူးဆက်ဝင်ရတယ်။ DHX ဆိုတာက ကျန်းမားရေးကောင်းမကောင်း စစ်ဆေးတာဖြစ်တယ်၊ သွေးစစ်တယ်၊ ဓါတ်မှန်ရိုက်တယ်။ ထင်ရှားတဲ့ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုတွေ့ရင်တော့ အနည်းဆုံး ၃ လလောက် စောင့်ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် TB အဆုပ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွင် မသွားခင် ရောဂါပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆေးဝါးတွင်ကို သောက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများအပြားလျှောက်ကြတယ်၊ ဒါပေမယ့် အင်တာဗျူးမအောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကရင်နီဒုက္ခသည်အခြေချနေတဲ့ နိုင်ငံများမှာ ဖင်လန်၊ နယူးဇီလန်၊ ဆွီဒင်၊ နော်ဝင်း၊ သြစတြေးလျှ၊ ကာနေဒါ နဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကရင်နီဒုက္ခသည်အများစု သွားရောက် အခြေချတဲ့ နိုင်ငံကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ အမေရိကသို့ သွားရောက် အခြေချကြတဲ့ ကရင်နီမိသားစုဝင်တချို့မှာ အခက်အခဲများနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဓိက ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများကတော့ ဘာသာစကားနဲ့ အလုပ်ကွာခြားမှုကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးတော့ အမေရိကန်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကိုဆက်သွယ်မေး မြန်းခဲ့ပါတယ်။ သူက အခုလိုပြောပါတယ် ̏ ခိရယ်ဆိုတဲ့ ကရင်နီလူမျိုးတစ်ယောက်က အမေရိကမှာရောက်တာ ၃ လလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်၊ သူ့ကိုအသားခုတ်စက်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်၊ သူက အသားခုတ်စက်ရုံမှာ ၃ ရက်ပဲ လုပ်နိုင်တယ်၊ သူဆက်ပြီး မလုပ်ချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူမလုပ်နိုင်ဘူး၊ တအားပင်ပန်းတယ်လို့ပြောတယ်၊ အဲတော့ သူ့အလုပ်ရှင်ကိုသွားတောင်းပန်တယ်״။ အမေရိကန်ရောက်ရင် အလုပ်လုပ်မှစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အိမ်လခ ဘာတို့ညာတို့ ဈေးကြီးလို့ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမေရိကန်ရောက်ချင်ရင် ပညာတတ်ထားမှ ပိုအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်တယ်။ ပညာတတ်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အခြေခံလောက် ပြောတတ်ဆိုတတ်မယ်ဆိုရင် နည်းနည်းလေးတော့ အဆင်ပြေမှာပေါ့။ ဘယ်နိုင်ငံကိုပဲရောက်ရောက်..သိဖို့က”nothing is free in the world”. ပါပဲ။
Posted by ubeethuree at 9:23 AM0comments Links to this post
ကယန်းလူငယ်ခေါင်းဆောင် သုံးဦး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ကရင်နီတိုင်းရင်းသားမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို ခြိမ်းခြောက်နေ...
ပြည်ထောင်စုမပြိုကွဲရေးဟု စစ်အစိုးရအမြဲသုံးနေကျ စကားလုံးသည်
အပေါ်ရံအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စစ်အစိုးရအာဏာ တည်မြဲရေးကိုသော်လည်းကောင်း အများပြည်သူအာ ရုံစွဲလာအောင်ခြိမ်းခြောက်သည့် အခေါ်အဝေါ်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှု၊ တရားမ၀င်အသင်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပြည်ပရှိ တရား မ၀င်အသင်းအဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်ခြင်း အမှုဖြင့် လွိုင်ကောင်ထောင်ထဲတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသော ကာယန်းလူငယ် ခေါင်းဆောင် သုံးဦးဖြစ်တဲ့..ခွန်ဘီးဒူ တောင်ငူထောင်၊ ဒီးဒီကို မန္တလေးထောင် နှင့် ကေကောရီယိုကို မိတ္ထီလာထောင်တွေဆီ ဇွန်လိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွေ ပြောင်းရွှေ့ထိန်းသိမ်းထားသည်ဟု ကြားသိရသည်။ ၎င်းစစ်အစိုးရ၏ လုပ်ရပ်သည် ကရင်နီတိုင်းရင်းသားမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များကို ခြိမ်းခြောက်နေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ အတွေးအခေါ်မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ၏ စည်းလုံးညီညွတ် မှုကို စစ်အစိုးရးမနှစ်သက်၍ ဤကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်အစိုးရ၏ မူဝါဒသည် တိုင်းရင်းသားများ၏စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုဖြိုခွဲရေး နှင့် နယ်မြေစိုးမိုးရေးကိုသာ အဓိက ထား၍ ဤကဲ့သို့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူ မကြာခဏခြိမ်းခြောက်ခံနေရခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ubeethuree at 8:44 AM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်သည် ပြည်နယ်ခုနှစ်ပြည်နယ်ရှိသည့်အနက် ကရင်နီ(ကယား) ပြည်နယ်သည်အသေးငယ်ဆုံး နှင့် လူဦးရေအနည်း ဆုံးပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်၏ ပထ၀ီအနေအထားအရ သေးငယ်သော်လည်း ထင်ရှားသော မျိုးနွယ်စုပေါင်းစုံဖြင့် စုစည်းထားသော ပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်ဖြစ်သည်ကို သိသိသာသာ တွေ့ရှိရပါ သည်။ ၎င်းပြည်နယ်ထဲတွင် နေထိုင်ကြသော ကရင်နီ မျိုးနွယ်စုများမှာ Karenni (kayah), Geko(Gaykho), Geba (Gaybar), Padaung/Kayan, Bres, Manu-Manaus (Manumanao), Yintale, Yinbaw, Bwe, Paku (Karen) Shan နှင့် Pa-O များတို့ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် Shan နှင့် Pa-O လူမျိုးစုများသည် ၁၈ ရာစုနှစ်နောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အင်္ဂလိပ်ကိုယ်လိုနီ၏ အတင်းအဓမ္မအခွန်ကောက်ခံမှု ဒဏ်ကြောင့် ကရင်နီပြည်နယ်ထဲသို့ ထွက်ပြေးရောက်ရှိလာသော လူမျိုးစုများဖြစ်သည်။ ကရင်နီလူမျိုးစုများသည် ဘိုးဘွားဘီဘေမျိုးရိုးဆန်ဆန်ဖြင့် ခေတ်ဟောင်းဆန်သော ယဉ်ကျေးမှုဝတ်စုံများ ဓံလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်းအလာ များရှိကြပြီး အခြားလူမျိုးများနှင့်မတူ တမူထူးဆန်းနေပါသည်။ အင်တာနက်ပေါ်မှ တချို့တင်ထားသော ကရင်နီ မျိုးနွယ်စုဓါတ်ပုံနှင့်တကွ သတင်းမှတ်တမ်းများ မှားယွင်းစွာဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကရင်နီမျိုးနွယ်စုများဖြစ်သည့် ကယန်း(ပဒေါင်)၊ ကရင်နီ(ကယား) များတို့၏ ဓါတ်ပုံများကို ကရင် လူမျိုးများဟု ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းဓါတ်ပုံနှင့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ကရင်နီမိခင်အဖွဲ အစည်းများတင်ထားသောပုံမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံခြားခရီးသွားများမှ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း မှားယွင်းသော သတင်းမှတ်တမ်းများသည် လူမျိုးစု၏ ဂုဏ်သိက္ခာ နှင့် ယဉ်းကျေးမှုများကို ထိခိုက်စေပြီး သမိုင်းအဆက်ဆက်အမှားအယွင်းများသာမက မျိုးနွယ်စုပျောက်ကွယ် ခြင်း ပြဿနာများ ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ကရင်နီမျိုးနွယ်စုများအား တင်ပြချင်ပါသည်။
Posted by ubeethuree at 2:47 AM0comments Links to this post
ငါ့မျက်ရည်တွေပါ . . .
ငါ့နှလုံးသားပါ . . .
ငါပါ .. . .
ငါ့ တစ်ဘ၀စာပေးဆပ်ခဲ့တာနဲ့ ညီမျှမှာပါ . .
Posted by ubeethuree at 8:29 PM 1 comments Links to this post
ကရင်နီ Kay Thoe Boe ပွဲတော် ကျရောက်တော့မည်
ကေးထိုးဘိုးခေါ် (တံခွန်တိုင်)ပွဲတော်သည် ကရင်နီဘိုးဘွားဘီဘေ အဆက်ဆက် မမေ့အပ်သော ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ဤ ကေးထိုးဘိုးတိုင်သည် ယောကျာင်္းလေးများသာ ကခုန် ခွင့်ရှိပြီး မိန်းကလေးများ ပါဝင်ကခုန်ခြင်းမပြုပါ.. သို့သော်
MusicSRC.com - Music Videos.. အချင်းချင်းရေလောင်းပေါင်းသင်းခြင်း ၊ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ဤ ကေးထိုးဘိုးပွဲတော်ကို April လတွင် အနည်းဆုံးတစ်ပတ် ကြာကြာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Posted by ubeethuree at 11:44 PM0comments Links to this post
ကယန်းလူငယ်ခေါင်းဆောင် သုံးဦး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထား...